युवा तथा बालबालिकामा देखियो यस्तो डरलाग्दो समस्या, अब के गर्ने ? | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य युवा तथा बालबालिकामा देखियो यस्तो डरलाग्दो समस्या, अब के गर्ने ?
युवा तथा बालबालिकामा देखियो यस्तो डरलाग्दो समस्या, अब के गर्ने ?
on: २९ आश्विन २०७५, सोमबार १३:१८ In: स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाडौँ । पछिल्लो समय युवा तथा बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ । ती समूहभित्रका करीब २२ लाख युवायुवती मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण पनि मन्त्रालयले गरेको छ । उनका अनुसार बाल्यकालमा नमिठा अनुभव, आघातजन्य घटना, लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसा, समाजिक विभेद, साथीबाट खिसिट्युरी, आर्थिक विपन्ता लगायतका कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखा पर्दछन् । “स–साना, बोझ एवं तनावलाई समयमै उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भविष्य निर्माणमा जुट्न प्रयासरत युवामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढिरहेको हो”, मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउछन् ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न उनी भन्छन्, “अभिभावकले बालबालिका तथा युवायुवतीका कुरा सुन्नुपर्छ । ती कुरालाई सकभर पूरा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । पूरा नभए के कारणले नहुने हो जवाफ दिनुपर्छ । अभिभावकले उनीहरुको कार्यबोझ हटाइदिनुपर्छ ।”